राजनीति, पशुपती र जात्रा
आउदो आकर्षण - गाउँखाने कथा ! (Nepali Gau Khane Ka...
एउटा जीवन यात्रा
न एता को बीश्वास
न उता को आस्था
एता जाउ उता जाउ
सधैं मनमा चिन्ता
पल पल मा
शिखर चुम्ने चाहना
बिना दोउरा को खल्ती
बे अर्थ का बेदना
एउटा गतिहिन यात्रा
बैशाखि बिना गती लिने
उस्को सामर्थ्य छैन
भ्रम को खेती भन्दा
उस्को अरु निती छैन
एउटा नैरास्य यात्रा
गोकुल ढकाल, बोस्टन
जनवरी ०६, २००९
सतिले सरापेको देशमा आज कती संकट छ, भाँचिएका तारबारहरु, भत्किएका पुलहरु अनी टुटे-फुटेका टावरहरु जोडीने कुरो त कहाँ हो कहाँ झनै अनेक समुहको नाममा फेरी तोडिने क्रमहरु जारी छ भन्ने कुरो त सर्बबिदितै छ । हाम्रा बा-आमाका कुटो कोदालोहरु फेरिएनन् । राजनीति गर्नेका घरहरुमा नोकर चाकर फेरिए । हाम्रा भाई भतिजाहरु तिनिहरुका ताली पड्काउने कार्यकर्ता भए । ति राजनीति गर्नेहरुका बन्दुक खेलाउने खेताला भए । मेजर साहेबका घर बनाउने ज्यामी भए । अनी आज तिनैका नोकर चाकर भएर गुजारा चलाई रहेका छन, हाम्रा भाई भतिजाहरु । चेलिबेटिहरु ति राजनीति गर्नेहरुका गुप्तचर थिए, नेताहरुलाई क्रान्तिमा सघाए र आज मुम्बईको कोठी उपहार पाए । नेताका आफन्तहरु पजेरो चढे, मन्त्राणी भए, सभासद् भएका छन । महँगो स्कुलको बिद्यार्थी र ठुलो प्रोजेक्टको निर्देशक भएका छन । तिनका आफन्तहरुले नै जता ततै नियुक्ती पाए तर मेरा बा आमा ले के पाए ? एक सय पचास लिटर मुल्यको मटितेल, छुन नसकिने अनी सडेको चामल, सोह्र घण्टा लोड्सेडिङ अनी सधैं चक्काजामहरु ।
कती कुरा गर्ने बिसमताका ? नभएका बिकासका, भत्किएका तिनै पुलहरुका । अब त मनै भाच्चिएको छ, कुनै सरकारको योजनाले पनि नजोडीने गरी भचिएको छ नेपाली जनताको मन । ००७ सालमा एक हजार सहिद भएका थिए होलान, ०१७ सालमा त्यसको दोब्बर मरे होलान । ०४६ सालमा कती मरे सबैलाई थाहा छ, त्यसपछी मरे लगभग १५ हजार । "नया" सरकार आएपछी मरिसके रे अन्दाजी २५० निर्दोश । अझै अपहरण गरी घाटि रेटिएका सात बर्षका सुमनहरुका लेखा जोखा त कता हो कता ! मोबाईल सेटको पैसाको निहुमा छप्किएका १९ बर्शे भाईहरुको कथा र चन्दा नदिएको निहुमा अनेक समुहको नाममा तातो गोली खाने र गिडिनेहरुको कथा यहाँ उल्लेख गरेर के साध्य लाग्ला र ? शान्ती, बिकास र सु-ब्यबस्थाको प्राप्तिको लागि जो गिडिए पनि आज देशले केही पाएन । भोलीको त कुरै छाडीदिउ । जलस्रोतको सबैभन्दा धनी देशमा बिजुली कुनै चराको नाम भएको छ । सगरमाथा मात्रै पग्लिएर बगेको पानीले सारा नेपाली पुग्छ, तर पिउने पानी कन्दमुल भएको छ । बुद्ध जन्मेको देश, इराक, सुडान र हैटी भन्दा अली शान्त भनेर चिनिएको छ । १० हजार गोर्खालिले १ लाख सेनालाई खुकुरी भरमा युद्ध जितेको कथा नेपालीले होइन, बेलायतिले जितेको ईतिहास भएको छ । खै कता गयो ? हाम्रो स्वाभिमान, बिरता अनी ईतिहास ? सतिले होइन हामीलाई शहिदले पनि धिक्कार्ने छ ।
बुद्ध त भारतमा जन्मिएको हो भन्ने भैसके हाम्रा नेताहरु !!! तिनिहरुले महाकाली नबेचेको भए पुग्दैनथ्यो बिजुली ? तिनका छोराहरुको हातमा हिजो बन्दुक र आज ल्यापटप । हिजो पोखरामा जहाज उडाउनेहरु आउने बर्ष बाबुआमालाई खेतमा हलो जोत्दै गरेको बिलौना पढ्न पाइने छ । लाग्छ, बिमान बनाउने ति हरुमा अहिले बल्पेन पनि छ कि छैन । अनी हेर्दा हेर्दै पशुपती मन्दिर जलेको देखिरहेछ, यो आँखा । धिक्कार होस् । गर्न त के नै सकिन्छ र तिनै जलेका नाङे पशुपती बाबाको नाम लिनु बाहेक ? हिजो हामी नैबेद्ध लिएर जान्थ्यौ भने आज खुकुरी र भला लिएर पूजारी काट्न गएका छन भाईहरु । जनताको भेटी खाएर मोटाएको पूजारीलाई कस्ले छुन सक्छ ? खुकुरी खाने त तिनै ढकाल, राइ, घिमिरे, श्रेष्ठ अनी भण्डारीहरु न हुन । हिजो अरब र खरब पारी आ-आफ्नो महल ठडाउने "राजनैतीक पूजारी" हरु भकाभक चोख्खिएका छन, तिनिहरु प्रती तेर्सिनु पर्ने हात पशुपती तिर लागेको छ, खोइ किन हो ! अब छिट्टै स्वयम्भु तिर कसैले आगो झोसेको देखिने छ, सुनिने छ । राम्रो कुरो केही बाँकी हुनेछैनन अब हाम्रो नेपालमा । भारतको सल्लाहमा शासन, चाइनाको सल्लाहमा रासन अनी अमेरिकाको सल्लाहमा नेपाल बेचिएको कथा पढ्न पाइनेछ । दुई चार अक्षर पढेका हामीले त्यसभन्दा बढी अरु के आश गर्नु ? अब छिट्टै पशुपतिमा अर्को माघे जात्रा लाग्ला, अनी बिकेन्द्रिकरण भने जस्तै त्यो जात्रा स्वयम्भु, गोरखकाली अनी शोभाभगवती हुँदै मुक्तिनाथ तिर लाग्ने छन । जात्रा हेर्न आउने भारती, चाइनिज र अमेरिकन भक्तालुहरुले जात्रामा नाङ्लो र डोको किनेसरी हामीलाई किन्ने छन । सुपथ मुल्यको लागि बार्गेनिङ गर्दै जात्राको मालिकसँग नेपालको भाई घटीघटाऊ हुनेछ र अन्तमा दुबैको सहमती पस्चात नेपाल बेचिने छ अनी हामी सारा नेपालीको सपना साकार हुने छ । पशुपतिले हामीलाई कल्याण गर्ने कुरो त छदैछ । अस्तु
आउदो आकर्षण - गाउँखाने कथा ! (Nepali Gau Khane Katha)
दौंतरीमा आउदो आकर्षण के होला? उत्तर दिनेलाइ सुनको माला सबै दौंतरी सहभागिताको लागी धेरै धेरै धन्यबाद। मिलाउनेलाइ फुलको माला। सुनको माला प्राय सबैले नै पाउनु भयो, फुलको माला भने दिलिप आचार्य ले पाउनु भयो। बधाइ छ दिलिप जि। दौंतरीमा नियामित आउने खाने कुरा गाउँखाने कथा हो। तलको तनहु जिल्लाको बन्दिपुर गाउँ उत्तर मिलाउन सहयोग होस भनेर राखिएको थियो।
संचार ब्यबसायिकता र लोकप्रियतामुखी भइरहेको बेलामा मौलिक साहित्य पाखा लाग्दै गएका छन। सबैले भन्दै सुन्दै आएको गाउँ खाने कथा नेपाली पत्र-पत्रिका ब्लगमा कतै देखेको छैन। त्यसैले भुल्न लागिएको यो बिधा दौंतरीमा नियमित ल्याउनेछु। आशा छ यसले पाठक बृन्दहरुलाइ पनि सक्रियरुपमा सहभागि गराउने छ। कतिपय गाउँखाने कथाहरुले लाक्षणीक रुपमा अश्लिलता पनि दर्शाउने हुंदा त्यसप्रती भने सजकता अपनाउने छु।
Posted by: Dautari Admin Labels: गाउँखाने कथा - nepali katha/riddle